Abamerika baseMerika - abaphila phambili 90 kwi-USA
Uphuhliso lwabantu abangama-90 kunye noLuntu oluPhezulu, uLuntu lubalo
Inani labantu baseMelika abaneminyaka engama-90 ubudala nangaphezulu liye laphindaphindwa kathathu ukususela ngo-1980, lifikelela kwizigidi ezili-1,9 ngo-2010 kwaye liya kuqhubeka likhuphuka ukuya kwii-miliyari ezingama-7.6 kwiminyaka engama-40 ezayo, ngokwemibiko emitsha evela kwi- US Census Bureau . Ukuba ucinga iinkqubo zoncedo zikaRhulumente ezifana noKhuselo loLuntu kunye neMedareri "ngokwemali" ngoku, jonga nje.
Ngo-Agasti 2011, iiCentral for Disease Control zixelele ukuba amaMerika ngoku aphila ixesha elide kwaye efa ngaphantsi kunanini ngaphambili.
Ngenxa yoko, abantu abangaphezu kwe-90 nangaphezulu ngoku benza i-4.7% yabo bonke abantu abaneminyaka engama-65 nangaphezulu, xa kuthelekiswa ne-2.8% ngo-1980. Ngo-2050, iiprojekthi ze-Census Bureau, isabelo se-90 kunye nesabelo esiphezulu siya kufinyelela kuma-10 ekhulwini.
[ Ama-Boomers Ngoku Ngokukhawuleza Kukhulayo Inani labantu ]
"Ngokwesiko, iminyaka yobudala yento ethathwa njengowokudala" ineminyaka yobudala engama-85 ubudala, "watsho u-He He ekukhululweni kweendaba," kodwa ngokunyuka abantu bahlala ixesha elide kwaye inani labantu abadala likhulile. Ukukhula ngokukhawuleza, inani labantu abaneminyaka engama-90 nangaphezulu lifanele lijonge ngakumbi. "
Ubungozi boKhuselo loLuntu
"Ukujonga okufutshane" ukuthetha ubuncinci. Ingongoma enkulu yokuhlala kwexesha elide loKhuseleko loLuntu - i-Baby Boomers - yaqala ukukhangela inkcazo yokuqala yoKhuselo lweNtlalo ngoFebruwari 12, 2008. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 ezayo, abangaphezu kwama-10,000 aseMerika ngosuku baya kuba neelungelo loKhuseleko lweNtlalo . NgoDisemba ka-2011, i-Census Bureau yabika ukuba i-Baby Boomers, abantu abazalwa ngo-1946 ukuya ku-1964, bebeyingxenye ekhula ngokukhawuleza yabantu base-United States .
Kule minyaka engama-20 ezayo, ngaphezu kwe-10,000 Baby Boomers ngosuku baya kuba neelungelo loNcedo lweNtlalo.
Inyaniso engathintekiyo kwaye ingenakukhunjulwa kukuba abantu baseMelika abahlala ixesha elide, inkqubo yoKhuseleko loLuntu ikhupha imali. Loo suku olubuhlungu, ngaphandle kokuba iCongress iguqule indlela yokuSebenza koKhuseleko loLuntu, ngoku iqikelelwe ukuba ifike ngo-2042.
90 Akudingekile ukuba entsha 60
Ngokwezinto ezifunyenweyo kwiNgxelo ye-American Community Survey ingxelo, i- 90 + e-United States: 2006-2008 , ukuhlala kakuhle kwiminyaka engama-90 kungabikho iminyaka elishumi elunxwemeni.
Uninzi lwabantu abaneminyaka engama-90 nangaphezulu bahlala bodwa okanye kumakhaya anesihlengikazi kwaye babike ukuba banokukhubazeka okwenyama ngokomzimba okanye ngokwengqondo. Ngokuhambisana neendlela zokuhlala ezide, amabhinqa amaninzi kunamadoda ahlala kwii-90 zazo, kodwa unomdla wokuba nemilinganiselo ephakamileyo yabahlolokazi, ubuhlwempu kunye nokukhubazeka kunabesetyhini kwiminyaka yabo-80.
Amathuba aseMdala aseMerika okudinga ukunakekelwa kwabantwana abasakhulayo aya kwanda ngokukhawuleza kunye nokukhula. Ngoxa i-1% kuphela yabantu abangaphezulu kwama-60 kunye no-3% kuma-70 abo angama-70 ahlala emakhaya asebekhulile, inani liye laya kuma-20% kulabo abaphantsi kwama-90 abo, ngaphezulu kwama-30% kubantu abaphezulu kwi-90, kwaye phantse 40% kubantu abangama-100 nangaphezulu.
Ngokudabukisayo, ukuguga kunye nokukhubazeka kuyaqhubeka kungena ngesandla. Ngokwe-data yolwazi, i-98.2% yabantu bonke abahlala kwi-home nursing babenokukhubazeka kwaye i-80.8% yabantu ababeneminyaka engama-90 abazange bahlale kwikhaya lononophelo babenokukhubazeka omnye okanye ngaphezulu. Ngokubanzi, inani labantu abaneminyaka engama-90 ukuya kuma-94 abanokukhubazeka ngaphezulu kweepesenti ezingama-13 ziphakamileyo kunezi-85 ukuya kwezingama-89 ubudala.
Iintlobo eziqhelekileyo zokukhubazeka ezibikwe kwi-Ofisi yoBalo babandakanya ubunzima bokuthatha iifayile zodwa kunye nokwenza imisebenzi ehambelana nokuhamba ngokufana nokuhamba okanye ukunyuka kwezitebhisi.
Imali engaphezu kwe 90?
Ngethuba lika-2006-2008, ingeniso ye-inflation-adjusted-median yabantu abaneminyaka engama-90 nangaphezulu yayingama-14,760 ayi-$ 1,760, malunga nesiqingatha (47.9%) esivela kwi-Social Security. Imali evela kwiiplani zempesheni yomhlala phantsi ihlawuliswe enye i-18.3% yemali engenayo kubantu abaneminyaka engama-90. Ngokubanzi, i-92.3% yabantu abaneminyaka engama-90 nangaphezulu bafumana inzuzo yeNtlalo yeNhlalakahle.
Ngo-2206-2008, i-14.5% yabantu abaneminyaka engama-90 kunye nabadala babika abahlali behlwempu, xa kuthelekiswa ne-9.6% kuphela yabantu abaneminyaka engama-65-89 ubudala.
Phantse konke (99.5%) kubo bonke abantu abaneminyaka engama-90 nangaphezulu babe ne-inshorensi yezempilo, ikakhulukazi i-Medicare.
Abafazi abaninzi abasindayo abangaphezu kwama-90 kunamadoda
Ngokwezi- 90 + e-United States: 2006-2008 , abafazi basinda kwi-90 yabo ngaphezu kwamanani amadoda ngokulinganiselwa kweyesithathu ukuya kwelinye.
Kuwo onke amabhinqa angama-100 phakathi kweminyaka eyi-90 ukuya ku-94 kwakukho amadoda angama-38 kuphela. Kuwo onke amabhinqa aphakathi kweminyaka eyi-95 ukuya ku-99, inani lamadoda liye lafika kuma-26, kwaye kuwo onke amabhinqa angama-100 ubudala nangaphezulu, angama-24 kuphela amadoda.
Ngo-2006-2008, isiqingatha samadoda angama-90 nangaphezulu sasihlala kwindlu kunye namalungu entsapho kunye / okanye abantu abangabandakanyekanga, abangaphantsi kweyesithathu bahlala bodwa, kwaye malunga neepesenti ezili-15 babeselungiselelo lokuphila njengamaziko anonyango. Ngokwahlukileyo, ngaphantsi kwekota yesithathu yabasetyhini beli qela leminyaka bahlala kwindlu kunye namalungu entsapho kunye / okanye abantu abangabandakanyekanga, abane kwi-10 bahlala bodwa, kwaye amanye ama-25% ayenamalungiselelo okuhlala esesikweni.
Inkomfa inika i-NASA iminyaka engama-25 ukubeka abantu kwi-Mars
Indlela Yokusebenzisana Neentsika Zingelosi uMikayeli noRafayeli ukuze banciphise ubuhlungu
Iindaba ezidumileyo zeShiva, uMonakalisi
Yintoni inqaba? Ukujonga kwi-Architecture
Iimpawu zokuziphatha, ukuziphatha, kunye nemilinganiselo: baxela njani?
Ukucinywa kwe-RMS Titanic
Indlela yokuvuka emva kokuwa ngaphandle kokuSusa i-Skis yakho
Iimpawu eziphezulu zeCattoon 50 zeNkcitho